Fomba Hihaona Ny Vehivavy Ivelan'ny Trano Fisotroana - Mangataka Ny Olona
Fomba Hihaona Ny Vehivavy Ivelan’ny Trano Fisotroana — Mangataka Ny Olona
Dia tsy misy na inona na inona ratsy kokoa noho ny miezaka mba hihaona ny vehivavy iray te-daty avy amin’ny feno bara? Indray mandeha aminareo hiady ny fomba teo amin’ny bartender order ny tenanao sasany rano herim-po, misy ny dingana rehetra ny scoping avy ny olona iray liana ianao, fihetseham-po avy na tsia izy dia tokana, manatona azy miaraka amin’ny fanokafana tsipika izay mendrika ampy hahazoana ny sainy sy ny fitandremana ny resaka mandeha. raha ianao samy fotsiny ao ny tsirairay dia salohim-bary ny be loatra ny mozika mafy. Tsy mazava tsara ny toerana tsara indrindra ho an’ny mahafantatra olona iray, dia aoka irery fipetrahana ny tenanao ny sipa. tsy misy tsara toerana mba hitsena ny vehivavy ankehitriny? Mazava ho azy, afaka miezaka foana ny vintana amin’ny fiarahana apps. Fa na dia ianao afaka swipe havia sy havanana ho handao nefa tsy mba hitafy pataloha, ianao mbola pitting ny tenanao manohitra ny arivo, na dia hafa tokan-tena any amin’ny faritra izay misy rehetra eto amin’ny izay mitovy tanjona farany: ny fivoriana ny vehivavy. Ary raha hitranga mba ho velona any ho any ny toerana misy ny tokan-tena-toerana skews amin’ny vitsy afaka ny vehivavy noho ny lehilahy, ianao maintsy hahita anao eo afovoan’ny ny isa lalao fa na dia ny ankamaroan’ny manam-pahaizana fanokafana ny andalana mety tsy afaka skew ny famindram-po. Ianao indray no mahazo mifanaraka amin’ny olona izay namaly ny hafatra, ary ny sasany fahagagana hitantana ny mahita ny andro, ny fotoana sy ny toerana izay miasa ho anareo roa, dia mbola misy foana ny fahafahana ianareo roa dia tsy hiafara mikapoka azy eny. Tsy ny lehibe indrindra ROI rehefa izany tonga ny fotoana. Koa, ianao vao hahita ny tenanao indray amin’ny ny hoe be olona bar ianao no eto raha tsy eo amin’ny toerana voalohany. Fa raha ianao ny fiarahana amin’ny aterineto sy manaitra ny avy ao amin’ny bar, ary ianao tsy mitady ny alina iray mijoro, izay olon-kafa afaka manantena hihaona amin’ny manaraka mety ho mpiara-miasa? Misy fomba tsara kokoa mba hihaona ankizivavy? Dia nanontany vitsivitsy tena ny olona, izay voahitsakitsaka ny fisotroana zava-niseho mba lazao aminay ny fomba nihaona izy ireo ny amin’izao fotoana izao ny mpiara-miasa — ary izy ireo efa vitsy creative soso-kevitra hizara izany. Ireto ny sasany ny fomba hitsena ny vehivavy tsy manana ny mandany fotoana sy vola eo an-toerana manondraka lavaka. Mihitsy aza ianao, raha tsy ny rehetra-kintana mpilalao fanatanjahan-tena, manam-pahaizana momba ny fifandraisana Kayla Kolinski hoy milalao amin’ny manodidina ny fanatanjahan-tena fikambanam afaka manampy bebe kokoa ny ara-tsosialy faribolana ary kosa, mamoha anareo ho amin’ny mety hisian’ny olona iray nihaona manokana. Iray amin’ireo fomba tsara indrindra isika, teneno ny mpanjifa mba hihaona ny ho avy manan-danja hafa dia amin’ny alalan’ny fidirana fiaraha-monina fanatanjahan-tena tary, hoy izy. Tranga ratsy indrindra, dia vao ho roa namana vaovao — saingy aza adino ny namana mahafantatra ny hafa, ny namana izay mahafantatra ny hafa, ny namana — sy ny mety ho atao amin’ny olona iray manokana, araka ny vaovao buddies dia lehibe kokoa noho ny hatramin’izay. Raha fivarotana kafe hangouts loatra tsindrio & matsilo ho anareo, dia ny fanatanjahan-tena fikambanam mety hifanaraka ny volavolan-dalàna ary, tsy toy ny amin’ny fivarotana kafe, ianao ho nahazo ny workout amin’ny, koa. Inona no Tena Lehilahy Hoe: izaho no nilalao amin’ny Zag baolina kitra ekipa nandritra ny telo taona, hoy Andrew. Aho ankavia ny ekipa amin’ny maha-dia mpilalao iray hafa mba handray ny vanim-potoana eny (izay taty aoriana dia nandao toerana roa misokatra). Kelly (ny sipany amin’izao fotoana izao) sy ny mpiray efitra tamiko vao nifindra tany Hoboken ary nanatevin-daharana Zag baolina kitra amin’ny maha-maimaim-poana ny mpiasa sy nahazo nataony teo amin’ny ekipa ao an-toerana. Ny namana eo amin’ny ekipa niantso ahy indray andro izy ireo, satria fohy ny mpilalao ary nanontany raha afaka milalao andro izay mameno ao. Nampahafantariny ahy Kelly, izay avy hatrany aho dia nanomboka nanorotoro. Niteny taminy aho mba aoka aho hahafantatra raha toa ka mbola ilaina ny mpilalao indray — ary dia nanomboka aho handeha hiverina amin’ny fotoana rehetra dia ilaina ny olona iray noho izany dia afaka mahita azy. Ny vanim-potoana nifarana, noho izany dia nanapa-kevitra ny hilalao ny vanim-potoana manaraka azy ireo, ary mandroso ny sasany simika miaraka aminy. Tafangona izahay, ary ny sisa dia tantara. Tsy vitan’ny hoe ny firotsahana an-tsitrapo ho amin’ny fanasoavana ny hetsika, fiaraha-monina ny tantara an-tsehatra na fundraiser hametraka anao eo amin’ny tontolo iainana amin’ny olona mitovy hevitra, fa izany koa dia manome ianao mandany fotoana miaraka amin ‘ izy ireo mba hahafantatra azy ireo — izay no fomba Francis, nihaona tamin’ny vadiny. Fony aho nipetraka tany Long Island, nanomboka ity asa an-tsitrapo nandritra ny krizy mpiandry raharaha, hoy izy. Efa roa manilika ny mpiara-miasa, ny iray amin’ireo izay niafara ho ahy ho vadiny. Tamin’izany fotoana izany dia nanana olon-tiany aho ary nanana olon-tiany, ka raha nieritreritra aho hoe izy no tsara tarehy, tsy nisy na inona na inona hafahafa flirty olana. Isika dia nizara ny iray amin’ny efatra ora fanovana isan-kerinandro nandritra ny roa taona. Tsy tena nihevitra isika, dia lasa namana tsara noho ny traikefa isika nizara fanampiana ny mpanjifa sy ny miresaka momba ny fiainana ivelan’ny ny mpiandry raharaha eo antso. Manodidina ny fotoana izy nandao ny mpiandry raharaha, dia samy fifanandrifian-javatra, dia nandeha namaky ny vokany. Dia nandeha avy commiserating momba ny laharan’ny asa commiserating momba ny maha-tokan-tena. Avy eo indray alina izy tonga eo, isika mpijery, ary ny momba ny herintaona sy tapany taty aoriana dia nivady izahay. Mino aho fa izay niasa tao amin’ny momba ny fihaonana izany dia hoe ny zavatra lasa tena organically, satria tsy isika no tsy mihaona ny olona. Isika voakasiky ny asa isika no manao sy ny zavatra dia nahita izahay teo amin’ny mahazatra nandritra ny taona maro. Marina, ity iray ity dia handeha haka anao avy izay hainao, fa ahoana koa ve ianao manantena ny hihaona olona vaovao? Fara-fahakeliny amin’ny dihy kilasy, toy ny matchmaker Susan Torbati points out, ny mifanohitra ho ao amin’ny famindram-po. Ny Yoga, ny dihy am-pianarana, na ny kofehy kilasy dia toerana lehibe mba hihaona ny vehivavy raha toa ka tsy afaka mahazo ho any izany, hoy izy. Fantatro fa betsaka ny lehilahy izay manandrana izany amin’ny fahombiazana be. Ianao ho antoka ho ao amin’ny vitsy an’isa. Na raha toa ka tsy mivory ny tovovavy, ianao ho fanatsarana ny maha-izy azy, izay no tena manampy ho an’ny lehilahy tokan-tena na aiza na aiza, raha mba hisarihana ny vehivavy tsara tarehy. Ary tsy toy ny be dia be ny fiarahana ny faritra, mandihy kilasy ihany koa ny namana toerana ho an’ny be taona ny olona mitady ny daty indray. Inona no Tena Lehilahy Hoe: Salsa mandihy dia ampahany ny kolontsaina, hoy Javier. Ka raha ny anabaviko dia namana nanokatra ny dihy studio eo amin’ny manodidina tonga aho noho ny fitokanana sy ny fiderana salsa kilasy — ary dia mahafinaritra be aho fa niafara hividy iray kilasy fonosana. Rehefa iray ihany no olona ao amin’ny mpianatra, dia nanana ny haka ny mpiara-miasa izay tsara, ka dia nanao namana be dia be nandritra ny fotoana misy. Manodidina ny fahadimy sa fahenina kilasy isika rehetra dia nikasa ny fihaonana amin’ny salsa club aorian’ny fianarana mba hanandrana izay nianatra izahay, ary nahita ny amin’izao fotoana izao sipa Ramona tany niaraka tamin’ny vondrona ny namana — iray izay nahafantatra ny iray amin’ireo mpianatra aho, dia avy amin’ny. Izy nampiditra anay izahay, ary niara-nandihy mandra-ny. m.
Isika efa niaraka nanomboka teo. isika rehetra efa nanana ity iray ity hitranga amintsika amin’ny sasany fahaiza — na ny mpiara-miasa taminy no housewarming antoko na ny mpiara-belona teo amin’ny efitrano manizingizina aminao savily avy ho an’ny ny mahazo miara-dry zareo ny fananana, dia handeha any amin’ny lanonana iray izay ahitana ny fantatrareo ihany ny miaramila dia afaka mahatsapa somary hafahafa. Fa na dia ianao no handeha, ary tsy hifanena na ny vehivavy tokan-tena fa ny alina, dia misy ny vintana tsy mety hihaona olona teo, izay afaka nametraka anao amin’ny ho avy ny sipa na fifandraisana maharitra — toy ny tranga ho an’ny Alex. I miasa amin’ny famolavolana mafy amin’ny kely ekipa efatra, hoy izy. Noho izany, rehefa iray ny mpiara-miasa nividy toerana izahay rehetra nasaina nandritra ny fankalazana ny. Izaho no afa-tsy ny iray amin’ny ekipa tsy misy mafy fialan-tsiny noho ny tsy mampiseho sy miampy, ny mpiara-miasa mipetraka any amin’ny manodidina ihany aho raha manao izany aho dia nieritreritra aho d savily avy. I ended up manana fotoana lehibe niady hevitra miaraka amin’ny mpiara-miasa dia ny rahavaviny sy ny vadiny — ny fotoana izay ny rahavavy fa izy mamelà ahy hametraka azy amin’ny oniversite namana iray izay mampihetsi-po eto, ary tsy nahafantatra na iza na iza. Matetika aho no miahiahy mikasika ireo olona mametraka ahy — fa nasehony ahy ny sary azy izy ary nihevitra aho fa faran’izay tsara tarehy, ka nanaiky aho. Nahazo ny isa an-tariby avy eo nentiny nivoaka ny herinandro na roa izy rehefa nifindra tany New York, ary dia namely azy intsony. Izaho sy izy roa foana ny hoe ny fomba tsara vintana isika fa dia nandeha ny fety. Rehefa mamely ny resaka amin’ny mety ho mpiara-miasa, ny fitadiavana marimaritra iraisana dia ny antsasaky ny ady. Davida, nanana ny sisin’ny momba ny resaka rehefa nihaona ny sipany amin’izao fotoana izao ao amin’ny boky iray fanaovan-tsonia. Nihaona ny sipa Stephanie amin’ny boky sonia ho an’ny Karen Russell, hoy izy. Ny tsipika dia karazana ny fitarihana korontana, ka dia nivadika ny olona ao ambadiky ny ahy ary nilaza aho fa tsy hanapaka anareo, ve aho? ary hoy izy hoe, Tsia.
Fa i Stephanie
Hoy aho hoe, Ka dia lehibe ianao Karen Russell mpankafy? ary hoy izy, Eny. Nanontany aho hoe: iza ny sasany ny toerana tena hafa ireo mpanoratra ireo, ary niresaka fohifohy. Izy no nahazo ny boky nanao sonia, dia nahazo ahy aho nanao sonia. Rehefa afaka izany, nitodika aho, ary izy no mijoro misy miandry ahy. Hay izahay na handeha Grand Foibe, noho izany dia nandeha misy miara -. Efa tena avy hatrany, tena mivandravandra ny simia. Isika dia nahazo an-jorony izay ilaina mba raraka, ary ny Stephanie, hoy aho te-hitandrina miresaka aminao aza. Ny fiaran-dalamby dia namela fotoana fohy talohan’ny ahy, ka nandeha niaraka taminy ny fiaran-dalamby, dia nitsambikina niala fotsiny toy ny varavarana no famaranana sy haingana mba hisambotra ny fiaran-dalamby. Efa nomeko azy ny raharaham-barotra karatra, ary izy nanoratra e-mail tamiko ny andro manaraka.
efa niaraka efa ho dimy taona
Fa lazaina, raha ianao be lehilahy, tokony ho fantatrao fa ny haingana indrindra sy ny fomba tsotra indrindra mba hihaona ny vehivavy mandeha an-tserasera. Na inona na firy taona ianao na inona vehivavy ianao an, an-tserasera mampiaraka toerana dia matetika surer sy manara-penitra ny fomba manatona ny vehivavy noho ny tsapaka manao hoe hi amin’ny olon-tsy fantatra eny imasom-bahoaka, izay no mety hahazo anao hoe ny miditra amin’ny vehivavy izay handeha momba ny andro, ary tsy mitady ny ho voa. Miaraka amin’izany ao an-tsaina, eto an-tampon online mampiaraka toerana Mangataka fahazoan-dalana hiditra ny Olona: Mangataka fahazoan-dalana Hiditra ny Olona: Dia mety tsy manaiky ny anarany, fa ny Lahatsary Mampiaraka dia Mangataka ny Olona no ambony laharana online dating site. Dia mirehareha maromaro izay ahitana mpampiasa fototra sy ny toerana (sy ny fampiharana) izay mora ampiasaina, ary koa ny lehibe fanangonana ny toe-of-the-kanto endri-javatra, Video Mampiaraka dia sarotra ny nandresy rehefa nahita ny fitiavana. Mangataka fahazoan-dalana Hiditra ny Olona: Eny, Lalao efa manodidina nandritra ny fotoana ela, — satria, raha ny marina. Na izany aza, dia zara raha misy feno vovoka vakoka ny fiarahana amin’ny aterineto. Ny toerana dia manolotra mpampiasa ny premium zava-nitranga, rehefa samy endri-javatra sy ny mpikambana, ny fanaovana izany dia safidy lehibe ho an’ny olona izay mitady ny fanosotra ny fiarahana vokatra. Mangataka fahazoan-dalana Hiditra ny Olona: Raha toa ianao mitady firaisana ara-nofo fa tsy noho ny fifandraisana, dia mety ho tianao ny mifidiana Namana izay nahita ny Lahatsary Fiarahana na ny Lalao. FF dia hookup toerana izay mifantoka amin’ny ny faniriany ao amin’ny efi-trano fa tsy noho ny zavatra hafa rehetra. Eo amin’ny endri-javatra, ianao dia afaka hafatra mpampiasa hafa, azo antoka, — fa ianao koa dia afaka miaina-fampitana, ohatra, raha ny Zavatra Mafana ny fizarana ny elanelan-laharana ambony sary, ny mombamomba sy ny lahatsary ao amin’ny habaka
← Online fifandraisana amin'ny ankizivavy
Maimaim-Poana Lahatsary Mampiaraka Chat Online, Live Video Chat Room →